E nwere ọtụtụ iri puku ndị ọrụ nke na-ahụ na ndị kasị mma na-nyere ka ọrụ n'ụwa nile na ọ na-agụnye ndị Refeyim nke ụlọ ọrụ dị ka Google, Apple na ọbụna YouTube ma ọ bụrụ na anyị na-eme njirimara nke abụọ ndị a dị iche iche. The nkuzi na e dere ebe a ga-eme ka ndị ọrụ na-na omimi ihe ọmụma banyere gụgharia ọrụ na-a na-awa site na ụlọ ọrụ n'ụwa nile. Ndị na-esonụ ọrụ ga-atụle n'isiokwu na oké nju:
1. YouTube Music gụgharia ọrụ
2. Google Music gụgharia ọrụ
3. iTunes music gụgharia ọrụ
4. Spotify gụgharia ọrụ
5. Soundcloud gụgharia ọrụ
Download / Record music free na TunesGo
Ọ bụ-ahụ kwuru na YouTube music gụgharia ọrụ makwaara dị ka music isi bụ otu nke kasị mma ọrụ nke e gosiri elu site ọrụ na ọ bụkwa na-ahụ kwuru na ọrụ a ugbu a kwụsịtụrụ dị ka Mmepe na-arụ ọrụ na beta version. Ndị na-esonụ usoro kwesịrị Otú ọ dị ike tinye n'ọrụ iji jide n'aka na ihe kasị mma na-nyere ka onye ọrụ na nke a:
a. The URL https://www.youtube.com/musickey bụ na-enweta na-na-isi na peeji nke Music Key Beta:
b. Onye ọrụ kwesịrị ka jupụta na adreesị ozi-e na mba n'ihi na ugbu a iji jide n'aka na ozugbo mmegolite e dechara na njikere e nwetara:
c. Onye ọrụ nwere ike Otú ọ dị ụtọ ọzọ YouTube gụgharia ọrụ dị ka nke ọma nke na-agụnye n'elu gosiri songs, top listi ọkpụkpọ, top music na-ewu ewu vidio egwú, na dị ka a ngosipụta onye ọrụ kwesịrị ileta https://www.youtube.com/playlist?list=PLFgquLnL59alCl_2TQvOiD5Vgm1hCaGSI nke mere na-esonụ na peeji Pop elu:
d. Ọ bụla nke song na e kwuru na peeji nke nwere ike pịrị na-amalite gụgharia na ọ na-eme ka n'aka na-eji ndị ọzọ na Web njikọ song nwekwara ike ebudatara mfe.
Ọ bụkwa otu nke kasị mma ọrụ na-eme ka n'aka na needful a mere n'ihi na onye ọrụ na mfe ụzọ na nke kacha mma pụta dị ka mma. The ọrụ nwere ihe karịrị nde mmadụ 22 na ngụkọta nke na-egosi na ọ na-ewu ewu na ọrụ na-jide ukwuu nti reviews banyere ọrụ kụziri site na ike nke Google ọrụ ka kwesịrị egwu na onwe reliant interface nke pụtara a ịgbanwe:
a. Onye ọrụ kwesịrị ka edebanye maka ọrụ na www.googlemusic.com
b. The ụzọ kwesịrị ekwesị isi na-ahụ na-ahọrọ:
c. Ọkọlọtọ akaụntụ na-ahụ ka a site n'inye niile chọrọ ọmụma:
d. The music njikwa a na-ahụ na-ebudatara:
e. The registration a na-ahụ chọrọ:
f. The music njikwa a na-ahụ na-synced na iTunes:
g. Ozugbo songs e uploaded mgbe ahụ isi na peeji nke music njikwa ga-emeghe:
h. Onye ọrụ ahụ kwesịrị ijide n'aka na song a pịrị na-egwu:
Makwaara dị ka iTunes redio bụ otu n'ime ọrụ na-ahụta ka ndị kasị mma dị ka ọ na-ahụ na ndị ọhụrụ songs bụ mgbe niile n'ebe na-ọrụ ọbịa. Ọ natara ukwuu nti reviews si ọrụ na ọ bụkwa na-kwuru na ihe kasị uru nke na-eji ọrụ bụ na ọ na-eme ka onye ọrụ na-eche na eziokwu nke gụgharia, nhọrọ Otú ọ dị nnọọ mgbagwoju. The yiri usoro bụ ka ndị a:
a. The iTunes a ga-meghere:
b. Na ala n'akụkụ aka ekpe redio icon bụ na-tapped:
c. Onye ọrụ kwesịrị iji jide n'aka na-apụta ụgbọ na-ịchọgharịrị na nke a nwere ike mere site swiping site n'aka ekpe gaa n'aka nri:
d. The + ihe ịrịba ama nwekwara ike pịrị iji jide n'aka na ndị ọhụrụ redio na-kere:
e. Onye ọrụ nwekwara ike na-agagharị Genres maka ọhụrụ ojii:
f. Onye na-ese aha na songs nwekwara ike-achọ:
g. Onye ọrụ nwekwara ike ịchọgharị na nhọrọ mgbe gụgharia a na-eme:
4. Spotify music gụgharia ọrụ
Nke a gụgharia ọrụ bụ otu n'ime ndị kasị mma na maka otu ihe ahụ ọ bụ-ahụ kwuru na ọ bụghị nanị na enye ihe kasị mma ọrụ na nke a ma na-enye ohere ndị ọrụ na-ọrụ na-ala nke nkà. The n'ozuzu stellar interface bụ ihe kasị mma uru nke na-eji ọrụ a na mgbe ọ na-abịa collection nke songs mgbe ahụ, ọ bụ na--ahụ kwuru na ndị a ga-emelite mgbe nile. Ọ bụ-ahụ kwuru na-esonụ bụ usoro na-ga-rụrụ na nke a:
a. The website bụ ka a bịa na:
b. Usoro na ọnọdụ a ga-nabatara ma na-agụ ma ọ bụrụ na onye ọrụ nwere oge:
c. The akaụntụ a na-ahụ na-enyocha:
d. Desktọọpụ ngwa a na-ahụ na-ebudatara:
e. The ina malitere button, a ga-enwe na-eme ka n'aka na Spotify songs na ọwa na-enwe na egwu na-streamed:
f. The search taabụ ike ga-eji na-agagharị na nka na songs:
g. Ọhụrụ playlist nwekwara ike kere:
h. The Radio nhọrọ nwekwara ike pịrị iji jide n'aka na gụgharia amalite:
m. Onye ọrụ nwekwara ike ime ka n'aka na ndị ọzọ na-soro na music na-akọrọ mfe:
5. Soundcloud music gụgharia ọrụ
The Soundcloud maa achoghidi iwebata. The kasị ukwuu uru nke na-eme n'aka na Soundcloud na-eji bụ na e nwere ihe-apụghị ịgụta ọnụ ọgụgụ nke songs n'ebe ahụ ma na mgbe ọ na-abịa interface ọ bụghị na mara mma. Ndị na-esonụ usoro bụ a ga-agbaso:
a. The ịrịba ama elu usoro bụ ga-agwụ agwụ:
b. Profaịlụ na-ahụ ga-eguzobe kpamkpam:
c. Onye ọrụ nwekwara ike bulite tracks enweghị ihe ọ bụla hassle na nsogbu:
d. The playlist Ndinam dịkwa nnọọ mfe:
e. The playlist nwekwara ike dezie:
f. The songs na isi peeji ndị na-enyoba nakwa na pịa na-amalite nkwanye:
g. The songs n'otu n'otu nwekwara ike-streamed:
h. N'ime iche iche onye ọrụ nwekwara ike n'ahịrị na songs na-egwu ha mfe:
> Resource> YouTube> Top 5 gụgharia Music ọrụ na atụmatụ